Zụta Delta 8 THC & Mmanụ CBD | Red Emperor CBD 2021 Ahịa kacha mma
Red Emperor CBD & Delta 8 THC Ka ụlọ ọrụ Delta 8 THC & CBD na -etolite kwa ụbọchị, ị nwere ike ịhụ CBD & Delta 8 THC ọ bụghị naanị na chọkọletị gị, tii ma ọ bụ swiiti gị kamakwa na ngwaahịa mara mma gị. gbasara Anyị Kpọtụrụ Anyị
Zụta Delta 8 THC ma ọ bụ CBD Mmanụ n'ịntanetị Site na
Eze Ukwu Uhie
Ka ụlọ ọrụ CBD & Delta 8 THC na -eto kwa ụbọchị. Taa ị nwere ike ịhụ CBD & hemp ọ bụghị naanị n'ime
chọkọletị gị, tii ma ọ bụ swiiti gị, kamakwa na ngwaahịa mara mma gị.
Akụkọ banyere osisi hemp malitere na 2700 BC mgbe Shen-Nung makwaara dị ka Red Emperor malite ileba anya n'ime osisi maka ọgwụgwọ ndị ya. Dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, Emperor Uhie ga -anwale nsị na ihe mgbochi ha na ya. Ọ chịkọtara akwụkwọ ahụike akpọrọ Pen Ts'ao. Akwụkwọ ntuziaka ahụike China oge ochie depụtara ọtụtụ narị ọgwụ ndị sitere na anụmanụ, akwụkwọ nri, na ịnweta ịnweta. Agụnyere na ọgwụ ndị a bụ osisi cannabis, “ma”
Osisi cannabis bụ ọgwụ pụrụ iche n'ihi na ọ na -ejikọ nwoke Yang, yana akụkụ Feminine Ya. Yin nọchiri anya mmetụta na -adịghị agafe agafe na okike ebe yang na -anọchite anya ike nke okike. Mgbe yin na yang na -ahazi, ahụ na -adị n'otu yana ahụike. Companylọ ọrụ Red Emperor CBD malitere na 2011 dị ka onye na -ekesa mkpokọta nke Red Emperor ma na -arụ ọrụ n'itinye ihe na -agwọ ọrịa nke osisi cannabis kemgbe ahụ.
Nyochaa igbe na onyonyo dị n'elu jiri igwefoto ama ama gị iji hụ nsonaazụ nnwale nke atọ nke anyị Nnukwu Delta 8 THC & CBD ngwaahịa. Anyị na-enye ọrụ a ka ị nwee ike ijide n'aka ịdị mma na ọdịnaya nke oke mma anyị Ngwaahịa CBD & Delta 8 THC.
Ngwaahịa CBD (34)
Isi okwu CBD (7)
Nlekọta Ahụike CBD (9)
Mmanụ CBD & Tinctures (11)
CBD AKA (3)
CBD maka anụ ụlọ (4)
Ifuru CBD (1)
Ngwaahịa Homelọ (12)
Enwere ụdị mmanụ CBD anọ
Mgbe ịzụrụ mmanụ CBD
CBD zuru oke
Ọ pụtara na o nwere akara nke cannabinoids, terpenes na mmanụ niile dị na osisi. O nwekwara obere THC, erughị 0.3%. Nchikota phytochemicals ndị a ọnụ na -ewepụta ihe akpọrọ "mmetụta njikọta", nke bụ mmụba nke mmetụta mmanụ CBD ka na -emeghị ka ị dị elu.
CBD zuru oke:
Dị ka CBD zuru oke, CBD sara mbara nwere cannabidiol na cannabinoids ndị ọzọ dị na osisi, ewezuga THC, nke ewepụrụ kpamkpam. A na-ahụkwa '' mmetụta njikọta '' yana ngwaahịa CBD sara mbara.
CDB kewapụrụ ma ọ bụ THC Free CBD Mmanụ:
CBD kewapụrụ bụ CBD n'ụdị ya kachasị ọcha. A na -ewepụ cannabinoids na kemịkal ndị ọzọ niile. Onye na -akwado CBD dịpụrụ adịpụ bụ na ọ bụ usoro CBD nwere mkpokọta CBD kachasị elu, ọ dịkwa mma maka ndị chọrọ ị nweta CBD buru ibu. Ihe kpatara nke a bụ enweghị ọnụnọ nke ndị nnọchi anya ya. Maka nke ahụ, CBD kewapụrụ iche bụ ngwaahịa CBD kacha ewu ewu.
Kedu ihe kpatara ị ga -eji jiri ngwaahịa mmanụ CBD?
Mgbe ịzụtara mmanụ CBD n'ịntanetị, otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji gwọọ mgbaàmà metụtara ọtụtụ ọnọdụ ahụike. CBD bụ ihe na -ebelata ihe mgbu. Enwere sistemụ n'ime ahụ anyị akpọrọ endocannabinoid system (ECS), nke na -enyere aka ịhazi ọrụ anụ ahụ dịka agụụ, ụra na nzaghachi mgbu.
Dị ka ụfọdụ ọmụmụ si kwuo, CBD na ndị neurotransmitters na ECS na -emekọrịta ihe, nke a na -akpọ endocannabinoids, na -enyere aka belata mmetụta mgbu. Ngwa mmanụ CBD na -ebute izu ike na nchekasị, na -enyere gị aka ịrahụ ụra nke ọma wee hapụ nchekasị, n'emeghị ka ị daa ụra ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ.
Ngwa mmanụ CBD na -enyekwa aka na ahụike akpụkpọ ahụ. Site na mbenata nsogbu akpụkpọ anụ iji nyere aka na nsogbu ịka nká.
Ngwaahịa anyị niile sitere na CBD bara ụba, hemp ụlọ ọrụ mmepụta ihe toro na USA, wee hazie ya na ụlọ ọrụ ibe anyị na Las Vegas, Nevada.
Kedu ngwaahịa mmanụ CBD anyị nwere ike ịnye gị?
Anyị na-enye ngwaahịa mmanụ CBD zuru oke zuru oke na sara mbara. N'ime ha, ị nwere ike ịhụ:
CBD Tinctures & mmanụ
Ihe mgbakwunye CBD: - Ogbugbu - capsules
Isiokwu CBD: - CBD analgesic - CBD patches
CBD maka nlekọta anụ ahụ: - Ude mmiri CBD - Ọbara CBD - CBD Anti-ịka nká
Osisi Ifuru CBD maka ịse anwụrụ
Mmanụ CBD Maka Vaping.
Ihe mgbakwunye nri CBD maka anụ ụlọ gị.
Delta 8 THC Ngwaahịa
Gịnị kpatara anyị ji bụrụ nhọrọ kacha mma?
Ngwaahịa kacha mma emere na US: Ngwaahịa anyị niile sitere na CBD bara ụba, hemp ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eto na USA, wee hazie ya na ụlọ ọrụ ibe anyị na Las Vegas, Nevada.
Phytochemicals adịchaghị: ewezuga ịnwe CBD ụlọ nyocha, ngwaahịa anyị niile nwere phytocannabinoids eke, gụnyere terpenes, flavonoids na obere akara THC.
Enwekwuwanye Bioavailability: Ngwaahịa anyị niile maka oriri ọnụ, dị ka mmanụ CBD na tinctures, na -enye gị ọnụego bioavailability dị elu, ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa CBD ndị ọzọ.
Nke ahụ pụtara na ọ ga -adịkwu irè.
Omume mmịpụta nchekwa: nke anyị Mmanụ CBD n'ịntanetị enweghị ihe mgbaze ma ewepụta ya site na iji ikuku carbon dioxide (CO2) n'ime sistemụ mechiri emechi.
Ọdịnaya CBD nwalere lab: ị nwere ike lelee akụkọ anyị sitere na ụlọ nyocha ndị ọzọ iji chọpụta CBD na ọdịnaya kemịkal ndị ọzọ na ngwaahịa anyị.
Ezigbo Ọrụ Ndị Ahịa: Otu ndị ọkachamara anyị ga -enyere gị aka na nhọrọ nke ezigbo ngwaahịa ịchọrọ. Maka anyị, afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe kacha mkpa.
Ngwaahịa Red Emperor CBD niile bụ nke atọ nwalere ma enwere ike nyochaa ya maka ịdị mma na ịdị ọcha site na iji ekwentị gị nyochaa koodu igbe dị n'okpuru.
Onye Mmekọrịta Ntanetị Ịntanetị anyị Dispensary Isenselogic.com ga -ahụ na edepụtara ngwaahịa gị na igwe ọchụchọ.
Zụta mmanụ CBD na ntanetị Site na